असल पार्टनर चाहनुहुन्छ ? यी ६ प्रश्न महिलालाई भूलेर पनि नसोध्नुहोस् – Jagaran Nepal
असल पार्टनर चाहनुहुन्छ ? यी ६ प्रश्न महिलालाई भूलेर पनि नसोध्नुहोस्
कहिल्यै पनि महिलालाई म चुम्बन गर्न सक्छु रु भनेर नसोध्नु होला । महिलाले चुम्बनको लागि पनि सोध्ने पुरुष मन पराउँदैनन् । चुम्बन पनि सोधेर गर्ने केटा उनीहरुलाई बच्चा जस्तो लाग्छ ।
यदि तपाइँकी स्त्रीले हिँजो तपाइँले पठाएको सन्देशको जवाफ दिइनन् भने त्यसलाई ठूलो विषय नबनाउनुस्। किन जवाफ नदिएको रु केहो भन्नेजस्ता प्रश्न गरेको स्त्रीहरुलाई मन पर्दैन। यसले तपाईं उनीसँग सुरक्षित महसुस गर्नु हुन्न भन्ने समेत देखिन्छ।
कुनै पनि स्त्रीलाई कति जना पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको छ वा कति जनासँग राख्छौं भन्ने प्रश्न जीवनमा भूलेर पनि नसोध्नुस्। महिलाहरुले यस्तो प्रश्नको जवाफ त कहिल्यै पनि दिँदैनन् नै उनीहरुलाई मन पनि पर्दैन।